Falanqeeyaha Meridian 1. Baaxadda baaxadda ballaaran: ogaanshaha ogaanshaha iyo kormeerka cudurada guud sida xubnaha gudaha ee aadanaha, addimada iyo qalfoofka, shan xubnood oo dareen ah iyo toddobo weji, dhogor iyo murqaha. 2. Baadhista nidaamka: ogaada ogaanshaha dhaqsaha iyo xanuun la’aanta ah nidaamka maskaxda, nidaamka wadnaha, habdhiska dareenka, nidaamka caloosha, nidaamka kaadi mareenka, nidaamka hepatobiliary, nidaamka neefsashada, nidaamka jimicsiga, caafimaadka caruurta iyo nidaamyada kale. 3. Cilad-sheegista qayb ahaan: Waxay noqon kartaa ...
Caafimaadka dhammaantood hal mashiin xz2010-106
Hubiyaha caafimaadka ee qaybaha kala duwan wuxuu ka kooban yahay loox weyn, shaashad soo bandhig, silig hogaanka ECG ah, cabirka dhiig karka (cunug, dhalinyaro qaangaar ah, qaangaar ah, qof weyn oo weynaaday), baaritaanka ogsijiinta dhiigga, moduleka qeybaha kala duwan, kaadida moduleka caadiga ah, moduleka korantada, guddiga muhiimka ah, Wuxuu ka kooban yahay jiif, kaas oo isku xirka gudbinta xogta uu ku xirnaan karo aalado shaqeynaya sida mitirka gulukoosta dhiigga, heerkulbeegyada kiliinikada, dhererka iyo miisaanka miisaanka, falanqeeyayaasha dhiigga dhiigga, akhristayaasha kaarka aqoonsiga, teebabka, iyo qalab kale.
Darbiga ayaa lagu rakibay qalab baaritaan guud
Wall Mounted General Practice Diagnostic Instrument 1. Muuqaal hawleed, oo ay ku jiraan sagaal shay oo shay baaris asaasi ah: cadaadis dhiig aan faafin, heerka garaaca wadnaha, heerkulka jirka, dheelitirka oksijiinta dhiigga, sanduuqa, baaritaanka kanaalka dhegta, baaritaanka neerfaha durugsan, baaritaanka aragga, baaritaanka indha la'aanta midabka, iwm 2. Maareynta macluumaadka, oo ku qalabeysan dekedo isku xira shabakado kala duwan, gudbinta waqtiga-dhabta ah ee natiijooyinka baaritaanka; ★ Hawlgal otomaatig ah, yaraynta dhibaatada hawlgalka gacanta, r ...
Nidaamka baaritaanka isku dhafan ee Wfk ee Daawada Dhaqanka Shiinaha
Dabool shan kooxood oo muhiim ah oo ka mid ah adeegyada caafimaadka bulshada ee aasaasiga ah: dadka caafimaadka ka hooseeya, dadka qaba cudurrada daba dheeraada, waayeelka, haweenka, iyo carruurta.
Caafimaadka caqliga oo dhan hal mashiin
Dhererka, miisaanka, BMI, heerkulka jidhka, aragga, halabuurka jirka, cadaadiska dhiigga, heerka garaaca wadnaha, oksijiinta dhiigga, ECG, sonkorta dhiigga, dufanka dhiigga, uric acid, iwm;
Naqshad isku dhafan, rakibid fudud iyo dayactir;
Hanuuninta codka oo buuxa, hawlgal aan walwal lahayn;
Kaamirada qeexitaanka sare, sawirka, taageerada fiidiyowga asalka ah;
Isku darka daawada Shiinaha iyo reer galbeedka waxaa ka mid ah baaritaanka dawooyinka reer galbeedka iyo aqoonsiga jirka ee dawada dhaqameed Shiinaha.
Sonkor gourd oximeter
Dhakhaatiirta qoyska iyo asxaabta waxay helayaan xogta waqtiga dhabta ah, waxay xukumaan sonkorta oo kaligaa ma noqon
Falanqaynta tirakoobka xogta, macsalaameyn waraaqaha iyo qalinka
Maareynta kaaliyaha sonkorowga, maareynta fudud ee sonkorta dhiigga
Hagaha baahinta codka, in kabadan hal weheliye
Marka lagu daro buuxinta shuruudaha xoogga sare, abrasion-ka sare, iwm, dharka difaaca ayaa inta badan ka duwan sababo kala duwan iyo ujeedooyin ilaalin awgood. Laga soo bilaabo qalabka dabiiciga ah sida suufka, dhogorta, xariirta, iyo macdanta "lead", ilaa synthetics-ka sida cinjirka, balaastigga, cusbi, iyo walxaha faybarka loo yaqaan 'synthetic fiber', ilaa qalabka casriga ah ee cusub ee shaqeynaya iyo walxaha isku dhafan. Waxay leedahay shaqo anti-permeability, permeability hawo wanaagsan, xoog sare, iyo iska caabin cadaadis sare hydrostatic.